Izindatshana zikaLorraine Ball Martech Zone |
Imibhalo nge ULorraine Ball
Ukukhangisa Kwezenhlalo Nezamabhizinisi Amancane
NgoMsombuluko, Januwari 18, 2016 NgoMsombuluko, Januwari 1, 2018 ULorraine Ball
I-Facebook, i-LinkedIn ne-Twitter bonke baqinise iminikelo yabo yokukhangisa. Ngabe amabhizinisi amancane agxumela emkhakheni wezokukhangisa wezokuxhumana? Lesi ngesinye sezihloko esizihlole ocwaningweni lokukhangisa nge-inthanethi lwalo nyaka.
Izibikezelo Zokumaketha zango-2016
NgoMsombuluko, Disemba 7, 2015 NgoMgqibelo, Disemba 26, 2015 ULorraine Ball
Kanye ngonyaka ngiphula ibhola elidala le-crystal bese ngihlanganyela izibikezelo ezimbalwa zokumaketha ngamathrendi engicabanga ukuthi azobaluleka kumabhizinisi amancane. Ngonyaka odlule ngabikezela kahle ukwenyuka kwezikhangiso zenhlalo, indima eyandisiwe yokuqukethwe njengethuluzi le-SEO nokuthi umklamo ophendulayo weselula wawungeke usaba ngokuzithandela. Ungafunda zonke izibikezelo zami zokumaketha zango-2015 ubone ukuthi ngangiseduze kangakanani. Ngemuva kwalokho funda ku
NgoMgqibelo, Novemba 9, 2013 NgeSonto, Novemba 17, 2013 ULorraine Ball
Lapho nje ucabanga ukuthi unesibambo kule nto yokukhangisa ye-inthanethi, indawo entsha ye-buzz. Njengamanje, ukumaketha kwangaphakathi kuyaqhubeka. Wonke umuntu ukhuluma ngayo, kepha iyini, uqala kanjani, futhi yimaphi amathuluzi owadingayo? Ukumaketha okungenayo kuqala ngolwazi lwamahhala, olunikezwa ngeziteshi zenhlalo, usesho, noma ukukhangisa okukhokhelwayo. Inhloso ukuvusa ilukuluku lethemba futhi ubenze bahwebe ngabo
Imithombo Yezokuxhumana: Umhlaba Wamathuba Amabhizinisi Amancane
NgoMsombuluko, Disemba 31, 2012 NgoMsombuluko, Disemba 31, 2012 ULorraine Ball
Eminyakeni eyishumi edlule, izinketho zokumaketha zabaninimabhizinisi abancane bezilinganiselwe. Imidiya yendabuko efana nomsakazo, iTv kanye nokukhangisa okuningi kokuphrinta bekubiza kakhulu kumabhizinisi amancane. Ngemuva kwalokho kwafika i-intanethi. Ukumaketha nge-imeyili, imithombo yezokuxhumana, amabhulogi namagama esikhangiso kunikeza osomabhizinisi abancane ithuba lokukhipha umyalezo wabo. Ngokungazelelwe, ungadala inkohliso, inkampani yakho yayinkulu kakhulu ngosizo lwewebhusayithi enhle kanye nomphakathi oqinile
Ama-Social Media Matures
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 11, 2012 NgoLwesithathu, uDisemba 26, 2012 ULorraine Ball
Eminyakeni engu-XNUMX edlule njengoba ithelevishini yayivela enkundleni, izikhangiso ze-TV zazifana nezikhangiso zomsakazo. Zaziqukethe kakhulu umuntu othanda ukujama omi phambi kwekhamera, echaza ngomkhiqizo, ngendlela ayengayenza ngayo emsakazweni. Umehluko kuphela ukuthi ubumbona ephethe umkhiqizo. Njengoba i-TV ikhula, kanjalo nokukhangisa. Njengoba abathengisi befunda amandla esetshenziswa esibukwayo bakha izikhangiso zokubandakanya imizwa, ezinye bezihlekisa, ezinye